XFCE: Inona izany ary ahoana ny fametrahana azy amin'ny DEBIAN 10 sy MX-Linux 19? | Avy amin'ny Linux
Ny momba azy Tontolo iainana Desktop XFCE tsindraindray, manome hevitra momba ny vaovaony farany koa izahay (4.16, 4.14, 4.12, ankoatry ny hafa), na amin'ny sasany foto-kevitra mitokona ho an'ny tenany, na a fampiharana mahaliana satria hoy Tontolo iainana Desktop.
Araka ny fiarahamonina misy anao:
"XFCE dia tontolon'ny birao maivana ho an'ny rafitra toa an'i UNIX. Ny tanjony dia ny ho mailaka haingana ary hampiasa loharanom-pahalalana vitsivitsy, ary mijanona ho manintona sy mora ampiasaina.". XFCE Community (www.xfce.org)
Ankoatr'izay, nasongadin'izy ireo fa:
"XFCE dia maneho ny filozofia nentim-paharazana UNIX momba ny fahamaotinana sy ny fahaiza-mampiasa azy indray. Izy io dia misy andiana fampiharana izay manome ny fiasa rehetra azonao antenaina amin'ny tontolon'ny birao maoderina. Voafetaka misaraka izy ireo ary azo fidiana amin'ireo fonosana misy mba hamoronana tontolo iainana tsara indrindra ho an'ny asa". XFCE Community (www.xfce.org)
1 Ny momba an'i XFCE rehetra
Ny momba an'i XFCE rehetra
Ny tetikasa amin'ny XFCE dia nanomboka nandritra ny taona 1996. Ny maha sampana marin-toerana azy ireo taty aoriana dia navoaka tamin'ny taona manaraka: 1998 (XFCE 2), 1999 (XFCE3) ary 2003 (XFCE4).
Ny farany izao dikan-tsy miova is the XFCE 4.14 ary ny kinova fampandrosoana ny kinova XFCE 4.16.
XFCE Matetika izy io dia hita ho ny fanoloana sahaza ny antitra, fa maivana, tsotra ary mandeha GNOME2, izay nosoloina ny maoderina fa mavesatra, sarotra sy matanjaka GNOME3.
Manana ny anarany izy, XFCE, satria tamin'ny voalohany dia nifototra tamin'ny fantatry ny maro XForms tontolo iainana mahazatra. Amin'izao fotoana izao dia tsy misy ifandraisany intsony na inona na inona ny voalohany, na dia misy ifandraisany amin'ny anarana anglisy manaraka aza io: X tontolo iainana kolesterola maimaim-poana.
Izany dia Tontolo iainana Desktop na eo aza ny taona maro mivoatra miandalana miadana tokoa, angamba noho ny ekipa kely mpandahatra fandaharana sy mpiara-miasa nampitahanao tamin'ny GNOME sy KDE Plasma. Izay mifanohitra amin'ny fitomboan'ny lazany sy ny fitomboan'ny vondron'olona mpampiasa azy.
Mitazona a endrika ivelany mahazatra rehefa mandeha ny fotoana mba hijanonana tsotra hampiasaina sy hifehezana, haingana sy mora amboarina, ary azo ovaina sy tsara tarehy.
Miorina amin'ny Fitaovana GTK3.
Manolotra a mahay mandanjalanja eo anelanelan'ny hafainganam-pandeha, ny filaminana ary ny fikirakirana.
Ampiasaina be toy ny Tontolo iainana Desktop misy anao any amin'ny Distros maro.
tena namboarina sy maivana, indrindra amin'ny sehatra Panel sy Desktop amin'ny alàlan'ny fananganana sy widget (goodies).
Fifanarahan'ny zanatany amin'ny fampiharana GNOME satria samy mampiasa GTK +. Na dia afaka mihazakazaka tsara aza Fampiharana KDE Plasma raha apetraka amin'ny fomba kely indrindra miaraka amin'ireo tranomboky ilaina amin'izany, ao amin'ny Operating System.
Ecosystem fampiharana tsotra fa amin'ny fampiharana tsara, na dia tsy dia sarotra be aza (mandroso).
Ekipa asa kely ary fanohanan'ny fandaminana kely, saingy manana vondron'olona mpampiasa betsaka amin'ny fitomboana tanteraka.
Tsy manohana fiasa be loatra toy ny tontolon'ny Desktop Desktop antonony toa ny Kanelina na MATE, saingy milamina sy tena maotina amin'ny fampiasana loharano izy io.
Para hamantatra bebe kokoa Azonao atao ny mitsidika ny tranonkala ofisialiny:
Tranonkala ofisialin'ny Tetikasa XFCE
Aiza no ahitanao ny Wiki, antontan-taratasy, tetik'asa (singa sy fampiharana), jereo ny vaovaony sy ny lisitry ny fanovana, ankoatry ny zavatra maro hafa. Ireto rohy manaraka ireto dia misy ihany koa ho famenony ny vaovao XFCE:
Blog miafina an'i Simon
DEBIAN Wiki amin'ny XFCE
Arch Wiki ao amin'ny XFCE
Safidio ny Tontolo iainana Desktop XFCE ary ny fitaovana hafa na ny fonosana fanampiny.
Famerenana indray ary fidio amin'ny fisafidianana ny Tontolo iainana Desktop XFCE, raha toa ka manana mihoatra ny iray Tontolo iainana Desktop napetraka ary tsy nifidy ny Lightdm Login Manager.
Fanamarihana: Taorian'ny fitsapana ny Tontolo iainana Desktop XFCE napetraka, azonao atao ny mametraka ny fampiharana fanampiny zanatany sy plugins ilaina ny mitovy amin'izany, ohatra,:
Ary tsarovy, ity no lahatsoratra fahatelo amin'ny andiany iray momba Tontolo iainana Desktop GNU / Linux. Ny voalohany dia momba GNOME, ny faharoa momba KDE Plasma, ary ity manaraka ity dia momba Kanelina, MATE, LXDE ary farany LXQT.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" momba ny «Entorno de Escritorio» fantatra amin'ny anarana hoe «XFCE», izay eo amin'ireo maro misy, ny feno indrindra amin'ireo maivana ary ny fahatelo ankafizina indrindra indrindra amin'izao tontolo izao «Distribuciones GNU/Linux», dia mahaliana sy mahasoa be, ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » XFCE: Inona izany ary ahoana ny fametrahana azy amin'ny DEBIAN 10 sy MX-Linux 19?
Kali Linux 2020.1 tonga miaraka amin'ny fanovana vitsivitsy, anisan'izany ny fidirana